News - Dayactirka Maalintii Iyo Dayactirka Mashiinka Wax Qaadaya ee Afuufa
1. Nidaamka caaga
Qalabka loo yaqaan 'gearbox' wuxuu u baahan yahay inuu si joogto ah u beddelo saliidda. Xullo 150 (ama 220) saliid marsho warshad cadaadis daran oo dhexdhexaad ah. Saliida beddel 500 saacadood ka dib isticmaalidda mishiinka cusub, ka dibna saliidda beddelo 3000 saacadood oo kasta. Marka mashiinku shaqada joojiyo oo sanduuqa gaasku weli ku jiro heerkulkiisu sarreeyo, saliidda beddel. Ka dib marka saliida hore la miiro, isticmaal qadar yar oo saliid ah si aad u nadiifiso qashinka, u nadiifi shaandhada bamka saliida saliidda, ka dibna ku dar saliid cusub 1/2 ~ 2/3 daaqada heerka dareeraha.
2. Dayactirka nidaamka haydarka qaaska ah ee xakamaynta dhumucda darbiga
Isbedelka saliida joogtada ah: Nidaamka Haydarooligu wuxuu inta badan kugula taliyaa isticmaalka 46 # saliid haydaroolis duug ah Ka dib 500 saacadood oo la isticmaalo mashiinka cusub, waxaa lagu talinayaa in la beddelo saliidda markii ugu horreysay, ka dibna la beddelo saliidda 3000 saacadood oo kasta. Nadiifi dhammaan miirayaasha (miirayaasha nuugista) inta aad saliidda beddeleyso. , Shaandhada cadaadiska sare, shaandhada soo noqoshada saliida, miiraha kursiga saliida) iyo haanta saliida, mugga saliida waa 1/2 ~ 2/3 qiyaasta heerka.
3. nidaamka Haydarooliga
Isbedelka saliida joogtada ah: Nidaamka Haydarooligu wuxuu inta badan kugula taliyaa isticmaalka 46 # saliid haydaroolis duug ah Ka dib 500 saacadood oo la isticmaalayo mishiinka cusub, waxaa lagu talinayaa in la beddelo saliidda markii ugu horreysay, ka dibna la beddelo saliidda sannad kasta (tayada saliidu way ka duwan tahay, isbeddelka isbeddelka saliidduna wuu ka duwanaan karaa), Nadiifi miiraha iyo taangiga saliida inta la badalayo saliida, mugga saliida waa 1/2 ~ 2/3 cabirka heerka
4.hadar dufan cadaadis xad dhaaf ah si joogto ah
Mashiinka dhaqaaqa iyo furitaanka iyo furitaanka iyo farsamooyinka farsamooyinku waa kuwo soo noqnoqda oo dhakhso badan, sidaa darteed waxay ku qalabaysan yihiin aalado otomaatig ah ama sifeyn gacmeed, laakiin qalabka saliidda si joogto ah loo hubiyo oo loo buuxiyo dufan. Tani waxay kordhin kartaa oo dheereyn kartaa adeegga mashiinka, waxayna kuu keeni kartaa faa'iidooyin dhaqaale oo wanaagsan. Nalalka shidaalka ee tareenka dhaqaaqa si gooni gooni ah, usbuucii hal mar; qaybo kale hal wareeg kasta.
5. Marin biyoodka
Waqtiga nasashada ayaa dheer. Marka heerkulku hooseeyo, marin biyoodka caaryada, qaboojiyaha mashiinka, qaboojinta foostada, madaxa madaxa u qaboojiya biyaha iyo qaybaha kale ee qaboojinta marin biyoodka waa in la qaboojiyaa. Biyaha qaboojinta waa in la nadiifiyaa si looga hortago qaab-dhismeedka muddada-dheer ama qabow dillaac.